Doorashadii ka dib, waa sidee xaalada siyaasada Sweden? | Somaliska
Sida aad la wada socotaan waxaa doorashadii baarlamaanka, gobolada iyo degmooyinka Sweden la soo gabagabeeyay habeenkii axada, iyadoo durbadiiba ay cadaatay cida guuleysatay iyo cida ku qasaartay doorashada. Warka oo kooban doorashada waxaa ku qasaaray dhamaan xisbiyada Sweden marka laga reebo SD. Cidkale oo guul gaadhay ma jidho balse xisbiga Socialdemokraterna (S) ayaa noqonaya kan soo dhisaya dowlada cusub.
Laakiin taas micnaheeda ma ahan in Socialdemokraterna (S) iyo Miljöpartiet ay guul gaareen iyagoo helay codod la mid ah kuwii doorashada 2010-ka balse waa in ay aad u qasaartay xulufada Alliansen qaasatan xisbiga Moderaterna (M) oo ku dhawaad 7 dhibcood qasaaray. Dhinaca kale xisbiga SD ayaa noqday kan guusha ugu weyn gaaray iyagoo siyaasaday 7 dhibcood, oo baarlamaanka ka helay 49 kursi. Laakiin guusha SD intaas keliya kuma eka ee waxay kuraas badan ka heleen degmooyinka iyo gobolada wadanka, iyagoo degmooyinka qaarkood noqday xisbiga ugu weyn.
Hadaba shalay ayaa gudoomiyaha xisbiga Socialdemokraterna (S) Stefan Löfven ku dhaqaaqay wadahadalka uu la galayo xisbiyada kale ee uu dowlada la dhisi doono qaasatan xisbiga Miljöpartiet. Löfven ayaa sidoo kale shalay u cadeeyay xisbiga Vänsterpartiet (V) in uusan ku dari doonin dowlada cusub balse haddii ay doonayaan in ay taageerada siin karaan baarlamaanka, taasoo uu aad uga xumaaday gudoomiyaha xisbiga V ee Jonas Sjösted.
Löfven ayaa wali ku rajo weyn in uu ka dhaadhiciyo gudoomiyaasha xisbiyada Folkpartiet (FP) iyo Centerpartiet (C) in ay la shaqeeyaan oo ay ka baxaan xulufada Alliansen balse waxay ku adkaysteen in aysan wax shaqo ah la samayn doonin Löfven. Waxaa la filayaa in maalmaha soo socda Stefan Löfven baarlamaanka la horkeeno oo raysal wasaare loo magacaabo, iyadoo la filayo in aysan cid kale ka hor imaan doonin xisbiga SD mooyee.
Laakiin dhibaatadu waxay dhici doontaa markii Stefan Löfven uu soo bandhigo miisaaniyada dowladiisa, taasoo ay waajibtahay in uu baarlamaanka ansixiyo. Haddii uusan heshiis la galin xisbiyada Alliansen (oo iyaguna sheegay in ay miisaaniyad gooni ah baarlmaanka hor keeni doonaan) waxaa dhici doonta in SD iyo Alliansen ay si wada jir ah u diidaan miisaaniyada Löfven taasoo keeni doonta in dowladiisa cusub ay durbadiiba dhacdo.
Dhinaca kale, xisbiyada dhamaantood ayaa cadeeyay in xisbiga SD oo hada noqday kan sadexaad ee wadanka ugu weyn aysan la shaqayn doonin balse taasi ayaa adkaan doonta haddii aysan xisbiyada ka tirsan labada xulufo wada shaqayn.
Xaalada dhaqaalaha Sweden ayaa laga cabsi qabaa in ay sii xumaato haddii uusan Stefan Löfven degdeg ku soo dhisin dowlad wax tar leh. Sida ay isku badasho xaalada siyaasada Sweden iyo wixii ku soo kordha waxaad kaga boggan doontaan Somaliska.
Ugu dambeyntii raysal wasaarihii hore ee Sweden Fredrik Reinfeldt iyo wasiirkiisi dhaqaalaha Anders Borg ayaa iyagu ka midnoqday shacabka, iyadoo shalay uu Reinfeldt afhayeenka baarlamaanka u gudbiyay iscasilaadiisa.
Ku darsada fikradaha ku aadan xaalada siyaasada iyo sida aad u aragtaan mustaqbalka wadanka.
Waa Ku wareerney meeshaan aliens iyo folkpartiet iyo SD iyageey u taalaa